ZayYarHlaing: Password တွေကို မမေ့အောင်….
736.56 MB ပမာဏရှိပြီး အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ အကန့်အသတ်တွေလည်း ရှိ မနေပါဘူး။ Windows NT / 2000 / XP / 2003 Server / Vista တို့တွင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
Password Dragon ဟာ Windows ပေါ်မှာ အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့ Password Manager ဖြစ်ပါတယ်။ Password တွေဟာ encrypt လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်အဖြစ် ထည့်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဖိုင်းကို နောက်ထပ် Password ပေးထားပြီး သိမ်းထားနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဖိုင်းကို Blowfish alogrithm နဲ့ encrypt လုပ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ password တွေအားလုံးကို သိစရာမလိုဘဲ ဒီဖိုင်းကို ပေးထားတဲ့ password ကိုသာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
0 comments: to “ Password တွေကို မမေ့အောင်…. ”